ဝက် ပေါင်သား ၅၀ ကျပ်သား
ငါးကွမ်းရှပ်ခြောက် ၁၀ ကျပ်သား
ငရုပ်ပွခြောက် ၁၀ တောင့်
ကြက်သွန်နီ ၄ လုံး
ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀ တတ်
ပဲဆီသန့်၃ စွန်း
ဆား ၀.၅ လ္ဘက်စွန်း
ငရုပ်ကောင်းမှုန့်ဝ.၂၅ လ္ဘက်စွန်း
အရသာမှုန့်၂ စွန်း
နနွင်းမှုန့်ဝ.၅ လ္ဘက်စွန်း
မရမ်းသီးခြောက် ၅ ခု
ရေသန့်၁ လီတာ
၁ ။ ဝက်ပေါင်သား ကို လက်မဝက် ခန့် အထူ အသား ၊ အဆီ ၊ အခေါက် တွဲလျှက်လှီးပြီး ဆား ၊ နနွင်းမှုန့် ၊ အရသာမှုန့် ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် တို့ ဖြင့်အရသာသွင်းထားပါ ၊ ငါးကွမ်းရှပ် ခြောက် ကိုလည်း ၃၀ မိနစ် ခန့် ရေစိမ်ထားပေးပါ။
၂ ။ ငရုပ်သီးအပွခြောက် ကို ရေနွေးဖြင့်အနည်းငယ်စိမ်ရျွ်အစေ့ ဖယ်ထုတ်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ချင်း ၊ ကြက်သွန်နီ တို့ နှင့် ကျေ ညက်အောင်ထောင်းထားပါ။
၃ ။ ဝက်ပေါင်သား ကို ပဲဆီသန့် အနည်းငယ်တွင် မီးပျော့ပျော့ဖြင့် အဆီထုတ်ထားပါ။
၄ ။ ပဲဆီသန့် နှင့် ဝက်ဆီ အနည်းငယ် ကိုအပူပေးပြီး အသင့်ထောင်းထားသော ငရုပ်သီးအနှစ် ကို နနွင်းမှုန့် ၊ နံနံပင်အရိုး တို့ဖြင့် ဆီသတ်ထားပါ။
၅ ။ ငရုပ်သီးအနှစ် ကျက်လျှင် အသင့်ရေစိမ်ထားသော ငါးကွမ်းရှပ်ခြောက် ထည့်ချက်ပေးပြီး ၃ မိနစ်ခန့်မွှေပေးရျွ် အသင့်အဆီထုတ်ထားသော ဝက်ပေါင်သား ကို ထည့်ချက်ပြီး ၃ မိနစ် ခန့် ထပ်မံမွေပေးရျွ် ရေသန့် နှင့် ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ၊ အရသာမှုန့် နှင့် မရမ်းသီးခြောက် တို့ ထည့်ရျွ် အဖုံးအုပ်ပြီး ဝက်ပေါင်သား နူးသည်အထိချက်ပေးပါ။
၆ ။ ဝက်ပေါင်သား နူးလျှင် အပေါ်ဆီ များကို ခပ်ထုတ်ဖယ်ရှားပြီး နံနံပင် အနည်းငယ်အုပ်ရျွ် အလှဆင်တည်ခင်းပါ။
Pork Thigh with Dried Saba Stew
Pork Thigh Meat 800 g
Dried Saba Fish 160 g
Dried Chili ( whole )5numbers
Seasoning Powder2tbsp
Fresh Corianderalittle
Preserved Sour Plum 50 g ( ma-yan-thee )
Cut the Pork Thigh Meat in ½ inch thick with meat, fat and skin together and marinate with some Salt, Crushed Black Pepper, Ground Turmeric, seasoning powder and put aside, then Soak the Dried Saba Fish in water for 30 minutes in advanced.
Soak the Dried Chili in hot water and pitted all seeds, then pound or blend the Dried Chili with some Ginger, Garlic and Onion until smooth as paste.
Cook the Pork Thigh Meat with some Peanut Oil over low heat to come out more fat from Pork Thigh until get enough.
Heat up the Peanut Oil with some pork fat in pot and sauté the Chili Paste with some Ground Turmeric and coriander Stem till get flavor and aroma.
When Chili Paste get aroma add in Dried Saba Fish and cook for3minutes then add in half-cooked Pork Thigh Meat and stir for another3minutes until get flavor then pour some water and seasoning with Salt, Crushed Black Pepper, Seasoning Powder, Dried Sour Plum( ma-yan-thee ) and cover until get tender.
When Pork Thigh Meat get tender and flavor, take out some fat from the stew as much as you can and Garnish with some Coriander Leave to serve.